Shiinaha RTD Soo-saare - Xigasho Tayada RTD - Testeck Co., Ltd.
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka > RTD
Isku xira RTD
Kala-soocid Heer-Kulka Ku-Xireha Isku-xireha kuleylka kuleylka wuxuu ku cabiraa heerkul ku saleysan dabeecadda beddelidda caabbinta walaxda iyo heerkulka. Marka dhexdhexaadka la qiyaasay uu muujiyo heerkulka heerkulka, heerkulka la cabiray waa celceliska heerkulka aniga ...
RTD sanduuqa isku xirka
Soo-koobidda kuleylka kuleylka-isku-xirnaanta Sanduuqa Guudmarka kuleylka kuleylka wuxuu qiyaasayaa heerkulka iyadoo lagu saleynayo astaamaha beddelidda caabbinta walaxda iyo heerkulka. Marka dhexdhexaadka la qiyaasay uu muujiyo heerkulka heerkulka, heerkulka la cabiray waa celceliska heerkulka ......
Dhammaad caabbinta kuleylka
End-face ThermalResistorOverviewCarbaatada-dhamaadka-surfacethermal waxay ka kooban tahay cabiraadda heerkulka cabbirka, tuubada difaaca ee banaanka ah, guga isugeynta, qalabka isku xidhka nidaamka, iyo fidinta gaashaanka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa adkeysiga cabbirka heerkulka ee dhirta riixidda marawaxadaha uumiga, dhuumaha biyaha ...
Isku dhexyaacay RTD
Isku-darka RTD wuxuu qiyaasaa heerkulka ku saleysan astaamaha beddelka caabbinta walaxda iyo heerkulka. Marka dhexdhexaadka la cabirayo uu muujinayo heerkulka heerkulka, heerkulka la cabiray waa celceliska heerkulka dhexdhexaadka ee xaddiga ay ku taal aaladda dareemayaasha heerkulka.
Fiilooyinka gaashaaman ee silsiladda gaashaaman ee RTD waxay si wax ku ool ah u xoojin karaan xoogga siligga iyo xoogga cadaadiska, waxayna kordhin karaan nolosha adeegga. Iska caabinta xoogagga dibedda, waxay sidoo kale ka hortagi kartaa dhibaatooyinka gudbinta ee ay sababaan cirridka jiirka. .
Heerkul-kulmeedka la soo ururiyey wuxuu cabirayaa heerkulka adoo adeegsanaya astaamaha ah in iska caabinta maaddadu ay isbeddelayso isbeddelka heerkulka. Marka uu jiro heer-kul kulmeed heer-kuleedka la cabbirayo, heerkulka la cabbiray waa celceliska heerkulka dhexdhexaadka ah halka ay ku taal aaladda dareemidda heerkulka.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan RTD soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh RTD kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.